Kooxaha Manchester United iyo Fulham oo dhibcaha ku qeybsaday garoonka Old Trafford… +SAWIRRO – Gool FM
(Manchester) 18 Maajo 2021. Kooxaha Manchester United iyo Fulham ayaa dhibcaha ku qeybsaday garoonka Old Trafford, kaddib markii ay ku kala baxeen bar-bardhac 1-1 ah, kulan horyaalka Premier League ah.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hoggaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Manchester United.
Daqiiqadii 15-aad kooxda Manchester United ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 1-0 ka dhigay Edinson Cavani, kaddib markii uu caawin ka helay saaxiibkiis Bruno Fernandes.
76 daqiiqo marka ay ciyaarta mareysay Fulham ayaa la dhalisay goolka bar-bardhaca waxaana 1-1 ka dhihay Joe Bryan oo caawin ka helay saaxiibkiis Bobby Reid.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhammaatay bar-bardhac 1-1 ah ay ku kala baxeen labada kooxood Manchester United iyo Fulham, kaddib ciyaar aad u xiiso badan oo ka tirsan horyaalka Premier League ay ku wada ciyaareen garoonka Old Trafford.
Kooxda Brighton oo guul soo laabasho ah ka gaartay 10 xiddig oo kooxda Manchester City ah… +SAWIRRO